धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्नको लागि सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ ।
जसका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मीन बहादुर बोहरा तथा सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजय लाल श्रेष्ठबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको राजपत्र प्राप्त गरी २०७५ फागुन १ देखि वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेको छ ।
यस वित्तीय संस्थाले बि.सं. २०७८ पुष मसान्तसम्ममा नेपालका २० जिल्लामा ४६ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत कुल १९१ जना कर्मचारी परिचालन गरि ३४,४३८ सदस्यहरुलाई आफ्नो लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सोही अवधिसम्ममा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी तर्फ रु. १ अर्ब ४४ करोड, निक्षेप संकलन तर्फ रु. ६२ करोड १४ लाख रहेकोमा अन्तर बैंक सापटी रु.६१ करोड ८० लाख रहेको छ ।
हाल चुक्ता पूँजी ७ करोड रहेकोमा सार्वजनिक शेयर निष्काशन भए पश्चात् रु. १० करोड चुक्ता पुजि कायम हुनेछ । हाल जगेडा तथा कोषहरू तर्फ कुल रु.१० करोड ३८ लाख रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को आषाढ मसान्तसम्ममा वित्तीय संस्थाको वितरण योग्य मुनाफा रु.२ करोड ६० लाख रहेकोमा पुष मसान्तसम्ममा वितरण योग्य मुनाफा रु.४ करोड ९ लाख पुगेको छ ।
रुसले आक्रमण गर्न लागेको भन्दै युक्रेनकी महिलाले बोकिन् विशाल राइफल